အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် Android ဖုန်း Sony Xperia Miro – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Thu, Jun 14th, 2012 mobile reviews | By သက်နိုင်စိုး အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် Android ဖုန်း Sony Xperia Miro
ယခုတစ်ပတ်မှာ မြန်မာ Mobile App Store ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကုိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဖုန်းလေးကတော့ Sony ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် Sony Xperia Miro ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sony Xperia မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Sony Xperia Miro ရဲ့ Operation System ကုိုတော့ နာမည်ကျော် Android OS ရဲ့ IceCream Sandwich Android 4.0 ကုိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Facebook ကုိုအသုံးပြုနေတဲ့ User တွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်တာဖြစ်လုို့ Facebook ရဲ့ features များ ကုို Sony Xperia Miro မှာအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနုိုင်ဖုို့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ တခြားဖုန်းတွေ Screen အရွယ်အစား လေးလက်မခွဲတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်နေချိန်မှာ ဒီ Xperia Miro ဖုန်းကုို Screen Size သုံးလက်မခွဲနဲ့ ပွဲထုတ်လာတာကုိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ ဒီဇုိုင်းကတော့ Sony ဖုန်းတုို့ ရဲ့ထုံးစံအတုိုင်းပဲအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိလှပါတယ်။
ဖုန်းကို Silver , Pink , Black , Gold စတဲ့အရောင်လေးမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ဖုန်းမှာ နောက်ကင်မရာအနေနဲ့5MegaPixel ရှိတဲ့ကင်မရာကုိုတပ်ဆင်ထားပြီး ရှေ့ကင်မရာကုိုအသုံးပြုပြီးတော့ Video Chat ပုံစံပြောဆုိုနုိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာတော့ Sony Xperia Micro ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အသေးစိတ်ကုိုဆက်လက်ဖတ်ရှုနုိုင်ပါတယ်။
3 comments on “အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် Android ဖုန်း Sony Xperia Miro”	Neo Linn on November 17, 2012 at 7:08 pm said:
I want to know about Xperia J when will be release
Reply ↓	http://martialartschampion.com/ on February 5, 2013 at 8:36 am said:
Υour style is unique іn cоmpаriѕon to other реople I
haνe reаd stuff from. Many thаnks for ρosting whеn
you havе the opportunity, Guеss I wіll just bοok mark this sіte.
Reply ↓	Zaw Linn on April 6, 2013 at 11:09 am said:
အကိုရေ Root ရောရပြီလားခင်ဗျာ Root လေးလိုချင်လို့ပါ
Yanlin Aung on HUAWEI Y220T ROOT လုပ်နည်းchogyi on Huawei Y210C Root , MM Font, KB, Wifi Fix လုပ်ပေးမည့် Toolhlaphonenaing on Viber : Free Messages & Calls v 3.0.1.3 for android(latest version)moe tun on Samsung Galaxy Official FirmwaresMG Aung Thu KO on Go locker(မြန်မာမှု) လွယ်ကူစွာဆန်းသစ်ထားပါတယ် Android Development